Ota Ward Cultural Arts Information Akwụkwọ "ART bee HIVE" vol.9 + bee! | Ota Ward Cultural Promotion Association
Ohaneze / akwukwo ozi>
Ota Ward Cultural Arts Information Akwụkwọ “ART bee HIVE” vol.9 + bee!
E bipụtara 2022/1/5
vol.9 oyi mbipụta
Ota Ward Cultural Arts Information Paper “ART bee HIVE” bu akwukwo ozi nke onwa nke ato nke nwere ozi banyere omenaala na nka, ndi Ota Ward Cultural Promotion Association biputara ohuru site na odida nke 2019.
"BEE HIVE" pụtara ụlọ a beeụ.
Mụ na onye ntaakụkọ ntaakụkọ "Mitsubachi Corps" gbakọtara site na mbanye ewebata, anyị ga-anakọta ozi nka wee nye ya onye ọ bụla!
Na "+ bee!", Anyị ga-eziga ozi nke enweghị ike iwebata na akwụkwọ.
Akụkọ njirimara: Obodo Japan, Daejeon + bee!
Onye nka: Kabuki Gidayubushi "Takemoto" Tayu Aoi Tayu Takemoto + bee!
Ọdịnihu nlebara Anya + anu!
Achọrọ m ijikọ mmasị ụmụaka na ọdịnihu
"Onye isi oche nke Japan Dance Federation of Ota Ward, Seiju Fujikage III, Seiju Fujikage, osote onye isi oche, Seiju Fujikage"
"Mazi Yoshiko Yamakawa, Onye isi oche nke Ota Ward Sankyoku Association (Prọfesọ Koto, Sankyoku, Kokyu)"
"Mazi Tsurujuro Fukuhara, Onye isi oche nke Ota Ward Japanese Music Federation (Egwu egwu Japanese)"
Ota Ward nwere omenala ọdịnala nke ya, ọtụtụ ndị na-eketa omenala ọdịnala na-anọchite anya Japan bi na ya.Otu dị iche iche ichekwa obodo na otu dị iche iche na-arụsi ọrụ ike, akụ atọ dị ndụ nke mba bikwa ebe a.Ọzọkwa, iji nyefee ụmụaka omenala ọdịnala, a na-enye nduzi nke ọma na obodo na ụlọ akwụkwọ.Ota Ward bụ n'ezie "obodo Japan" jupụtara na omenala ọdịnala.
Ya mere, oge a, anyị ga-achọ ịkpọ ndị niile so na Ota Ward Japanese Music Federation, Ota Ward Japan Dance Federation, na Ota Ward Sankyoku Association ka ha kwuo maka omenala omenala na Ota Ward, karịsịa abụ Kabuki.
Site n'aka ekpe, Mr. Fukuhara, Mr. Fujima, Mr. Yamakawa, Mr. Fujikage.
Ụmụ nwanyị na-akpa àgwà ọma躾Ịdọ aka ná ntịN'ihi ihe ọ pụtara, ihe ka ọtụtụ ná ndị mmadụ na-eme ihe ụfọdụ.
Nke mbụ, biko gwa anyị profaịlụ gị.
Fujikage "Aha m bụ Seiju Fujikage, onye bụ onyeisi oche nke Ota Ward Japan Dance Federation. Na mbụ, m na-arụsi ọrụ ike na Fujima style n'okpuru aha Fujima Monruri. Eso m n'okpuru aha nke Fujima.Na 9, anyị ketara aha Seiju Fujikage, onye isi ọgbọ nke atọ Seiju Fujikage.Ọgbọ mbụ, Seiju Fujikage *, bụ onye na-apụtakarị n’akụkọ ihe mere eme nke ịgba egwú ndị Japan, n’ihi ya, ọ na-esiri m ike iketa aha siri ike. "
Seiju Fujikage (Onye isi oche otu ndị otu egwu egwu Japan, Ota Ward)
Nagauta "Toba no Koizuka" (National Theatre nke Japan)
Yamakawa: Aha m bụ Yoshiko Yamakawa, abụkwa m onyeisi oche nke otu ọgbakọ Ota Ward Sankyoku, m nọ na Kyoto, Kyoto.TodokaiKedu ka ọ dị? Anọ m na-eme ihe kemgbe m ghọrọ onye nkụzi mgbe m dị afọ iri na isii.Mụ na nwunye m bịara Tokyo na 16, nwunye m bụkwa ụlọ Iemoto nke ụdị Yamada.Kyoto Todokai bụ ụdị Ikuta.Kemgbe ahụ, a na m amụ ụdị Yamada na ụdị Ikuta. "
Fujima "Aha m bụ Hoho Fujima, onye bụ osote onye isi oche nke otu Japan Dance Federation na Ota Ward. Enwere m obodo Kirisato dị na Ota Ward, a mụrụ m n'ebe ahụ. Nne m bụkwa nna ukwu. M na-eme nke a. yabụ mgbe m ghọtara ya, anọ m n'ọnọdụ a."
Fukuhara "Abụ m Tsurujuro Fukuhara, onye isi oche nke Ota Ward Japanese Music Federation. A na-ekwu na ụlọ m bụ ihe egwu egwu maka nna nna m, nna, na ọgbọ nke atọ m.鼓Ga n'ihu A na-akpọkwa ịgbà.Maka mụ onwe m, a na m apụta na ihe nkiri Kabuki, nnọkọ ịgba egwu Japan, na ihe nkiri. "
Biko gwa anyị gbasara nhụta gị na nka nka omenala.
Fujikage: "Mgbe m bụ nwata, ọtụtụ n'ime ụmụ agbọghọ na-eme ụfọdụ nkuzi, ọ bụrụgodị na ha bụ ụmụ agbọghọ nkịtị na ụmụ agbọghọ niile nọ n'ógbè ahụ. E kwuru na ọ ga-aka mma ịmalite site na June 6, m malitekwara. site na ịhọrọ egwu sitere na nkuzi dị iche iche site na June 6th, mgbe m dị afọ 6."
Fujima: "Enyi m na-aga nkuzi ịgba egwu, n'ihi ya, m soro ya hụ ya, amalitere m ya mgbe m dị afọ 4. Enwetara m onye nkụzi n'ụlọ akwụkwọ Fujima Kanemon. Ọ dị nso n'ụlọ m. Ya mere, m nwetara ya. na-aga na-efegharị efegharị (ọchị) N'oge gara aga, m na-eme ọtụtụ ihe, ụbọchị ọ bụla ọzọ, ọ dị m ka nwa agbọghọ ahụ ga-ekogide furoshiki n'ebe niile n'ime obodo."
Yamakawa: "Mgbe m dị ihe dị ka afọ 6, amalitere m ịmụ koto site na mmalite nke onye m maara. Onye nkụzi n'oge ahụ bụ Masa Nakazawa, m nọgidere na-eme ihe n'ebe ahụ. Mgbe m nọ n'afọ nke abụọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị, m nọgidere na-eme ihe. nwetara nzere ma meghee klas ozugbo, mgbe m banyere na mahadum, e nwere ụmụ akwụkwọ, a na-eme egwuregwu egwu mbụ n'otu oge ahụ m gụsịrị akwụkwọ na mahadum, mgbe nke ahụ gasịrị, m gafere ule nke NHK Japanese Music Skills Training. Association na Tokyo, na otu ugboro n'izu maka otu afọ. M si Kyoto gaa Tokyo, ebe m nwere njikọ na Yamakawa Sonomatsu, m na-anọgide na-eme otú ahụ. "
Yoshiko Yamakawa (Onye isi oche otu Ota Ward Sankyoku)
Yoshiko Yamakawa Koto / Sanxian Recital (Ụlọ Nzukọ Kioi)
Fukuhara: “Papa m bụ ọkaibe n’ịkụ egwú Japan, ụlọ ndị mụrụ mama m bụkwa Okiya *, n’ihi ya, m na-eji ịgbà shamisen na taiko tolite kwa ụbọchị. Mgbe m bụ nwata, onye ọ bụla na-akụ egwú Japan. Otú ọ dị, Mgbe m banyere n'ụlọ akwụkwọ, amaara m na ọ bụghị ndị enyi m niile na-eme ya, n'ihi ya, m kwụsịrị ime ya otu ugboro, hapụkwara m ya n'ihi na m nwere nwanne m nwaanyị tọrọ na nwanne m nke tọrọ m, ma n'ikpeazụ, m ga-emeri nke atọ. ọgbọ, ma m ka dị ugbu a."
Achọrọ m ka a gwa ụmụaka karịa na "ndị Japan bụ ndị Japan, ọ bụghị ya?"
Biko gwa anyị gbasara ịma mma nke onye ọ bụla n'ime gị.
Fujikage "Ihe na-adọrọ mmasị nke ịgba egwú Japanese bụ na mgbe ị na-aga mba ọzọ na-agwa ndị na-agba egwú si n'ụwa nile okwu, ị na-ekwu," Ịgba egwú dị ka ndị Japan na-agba egwú enweghị ike ịhụ na mba ndị ọzọ. "Ị na-ekwu na ihe kpatara ya bụ nke mbụ nke akwụkwọ edemede. Ọ na-egosipụta akụkụ elu elu na nke dị n'ime akwụkwọ ahụ ọnụ. Ọ bụkwa ihe nkiri, egwu egwu na ọbụna ihe nka. Ana m ekwughachi mmasị ya site n'ikwu na ọ dịghị mba ọzọ nwere ihe niile nke ịgba egwú dị ka ịgba egwú Japan. "
Fujima: "Ọ na-amasị m ịgba egwu, m na-aga n'ihu ruo ebe a, ma m na-eche ma m ga-ejikọta otu akụkụ nke Yamato Nadeshiko na ụmụaka dịka nwanyị Japan. aga na-ehulata otu a" na "Agaghị m anọdụ n'ụlọ tatami", mana m na-agwa gị ụdị ihe ahụ kwa ụbọchị, achọrọ m ọnụ ọgụgụ ụmụaka ndị a na-ekwu na ha bụ ndị Japan, ka ha na-abawanye ka dị ka o kwere mee. Achọrọ m ụmụ agbọghọ Japan na-eto eto ka ha zipu ụwa, "Gịnị bụ ụmụ nwanyị Japan?" Ọ bụ egwu ndị Japan.
Maazị Shoho Fujima (osote onye isi oche nke Japan Dance Federation, Ota Ward)
Kiyomoto "Ememme" (National Theatre nke Japan)
Yamakawa: "Ugbu a, na-ege ntị akụkọ banyere ndị nkụzi abụọ ahụ, ọ masịrị m nke ukwuu. Echeghị m banyere ya ma nwee mmasị na ya. N'ileghachi anya azụ, esonyere m ìgwè ọzụzụ ahụ wee gaa Tokyo otu ugboro n'izu. nọ ebe ahụ, ọ bụrụ na m na-ele akara na Shinkansen, nwa amadi na-esote ga-agwa m okwu, na m dị obere nke na m gwara ya echiche m banyere koto. E nwere, na okwu, ụda na ụda, dị ka uto na ịkwagharị osisi.Ọ bụ ụda na-adịgide adịgide, ihe na-amasị m.Naanị m na-echeta ịsị, "Achọrọ m ime ka onye ọ bụla mara ihe mara mma dị iche na egwu Western."Ọ ga-amasị m ịga n'ihu na nleta na-echefughị ​​ebumnobi mbụ m. "
Fukuhara: Amalitere m iche na egwu Japanese ga-ewu ewu karị, wee malite ụlọ ọrụ na 2018. Ọtụtụ n'ime ndị ahịa na-abịa na concert anyị bụ ndị na-ahụ n'anya bụ isi = ịmụta egwu Japanese na ịgba egwú, Otú ọ dị, ọ na-esiri ndị ahịa ahịa ike ịbịa. N'ihe banyere egwú ndị Japan, ọ na-esikarị ike ịmata ihe ị na-akpọ, ihe ị na-abụ, ma ọ bụ ihe ị na-agba, ya mere ọ bụ panel ma ọ bụ foto. Anyị na-akpọ ndị si n'ụdị ndị ọzọ dị ka ogologo abụ, samisen, sushi, na biwa, yana ndị na-egwu egwu, site na itinye aka na geisha, a na m agba mbọ soro onye ọ bụla na-egwu egwu na ogbo nke ụwa Hanayagi. na-eme ihe omume ndị dị otú ahụ."
Biko gwa anyị gbasara otu ọ bụla.
Fujima "Mmalite nke Ota Ward Japan Dance Federation bụ onye na-eme ihe nkiri Sumiko Kurishima * na ụdị Mizuki Kosen Mizuki. Ọ bụ onye na-eme ihe nkiri na-anọchite anya Matsutake Kamata tupu agha ahụ. Amaghị m ihe ọ bụla n'ihi na ọ dịghị ihe ọ bụla n'oge ahụ. Otú ọ dị, echere m na Prọfesọ Kurishima nwere ike ịmepụta na 30. Anyị nwere nzukọ 3 n'afọ nke 37 nke Reiwa, mgbe ahụ anyị na-anọghị n'ihi Corona. "
Yamakawa "Sankyoku Kyokai malitere na 5. Na mbụ, anyị malitere na ihe dị ka mmadụ 6 ma ọ bụ 100 gụnyere onwe m. Onye ọ bụla nwere ntozu, ma ugbu a anyị nwere ihe dị ka XNUMX mmadụ."
Fukuhara "Ota Ward Japanese Music Federation nwere ihe dị ka ndị òtù 50. Ọ bụ ndị nkụzi na-egwu egwu dị iche iche nke Japan dị ka Nagauta, Kiyomoto, Koto, Ichigenkoto, na Biwa. Echere m na ọ bụ gburugburu 31, otu afọ gara aga. Nna m bụ onyeisi oche, ma mgbe nna m nwụsịrị, abụ m onyeisi oche."
Fujima : "Ugbu a, enwere m naanị Federation Dance. Enweghị m ike iji akpụkpọ ụkwụ ahịhịa nwere ụkwụ abụọ, ya mere, Japanese Music Federation na-asa ụkwụ m (ọchị). Ugbu a, nwa m nwoke na-ekere òkè na Njikọ Egwuregwu Japanese.KiyomotoKiyomotoMisaburoYoshisaburobụ. "
Ụmụntakịrị emeghị nke ọma ka ha na-eme ugbu a.Ihe mmụta dị mma.
Ota Ward ọ nwere mmasị na nka nka ọdịnala karịa ngalaba ndị ọzọ?Echeghị m na ward ọ bụla nwere otu gọọmentị etiti.
Yamakawa: "Echere m na onyeisi obodo Ota Ward na-etinye mgbalị n'ime nkwekọrịta."
Fukuhara "Mayor Ota ewegharala dị ka Honorary Chairman. Anụbeghị m banyere ya n'oge na-adịbeghị anya, ma mgbe m dị obere, ụda shamisen na-aga n'ụzọ nkịtị n'ime obodo. E nwere ọtụtụ ndị nkuzi Nagauta na agbata obi. A bụ m. Ebe a, echere m na e nwere ọtụtụ ndị na-amụ ihe n'oge gara aga, a na-enwekarị onye nkụzi n'obodo ọ bụla."
Fujima: "Ụmụaka ochie emeghị ọtụtụ ihe ka ha na-eme ugbu a. Ọ bụrụ na enwere onye nkụzi drum, m ga-aga nkuzi drum, ọ bụrụ na e nwere onye nkụzi shamisen, m ga-eme shamisen, ma ọ bụ m ga-eme koto. Ihe ọmụmụ ndị ahụ bụ ihe nkịtị."
Biko gwa anyị gbasara mmemme gị n'ụlọ akwụkwọ dịka nkuzi.
Fujikage "E nwere ụlọ akwụkwọ elementrị ebe m na-eleta ma na-eme ihe ugboro abụọ n'ọnwa. Mgbe nke ahụ gasịrị, mgbe onye gụsịrị akwụkwọ na klas nke isii, achọrọ m ka o nye nkuzi banyere omenala ndị Japan, n'ihi ya, m na-ekwu banyere ya ma mee ụfọdụ nkà bara uru. Enweela m nkà. oge na-ege ntị na arụmọrụ na njedebe. Ọ bụ ezie na ụdị bụ ubé dị iche iche dabere na ụlọ akwụkwọ, m na-aga ụfọdụ ụlọ akwụkwọ. "
Yamakawa Onwere ndi otu na aga ulo akwukwo junior na ulo akwukwo sekọndrị na-akuzi ihe n'udi ihe omume ulo akwukwo, umu akwukwo nke ulo akwukwo ahu sokwa na egwu otu, a ga m akuzi na ulo akwukwo junior n'ebumnobi. nke inweta nke mbụ na nke abụọ graders maara koto. Afọ a bụ afọ nke atọ."
Fukuhara: "Ana m eleta ụlọ akwụkwọ sekọndrị nke Yaguchi kwa ọnwa. M na-ekere òkè mgbe niile na nkwupụta nke federation otu ugboro n'afọ. N'oge na-adịbeghị anya, Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology na-ekwu banyere egwu Japanese na agụmakwụkwọ ụlọ akwụkwọ, ma onye nkụzi. M na-anụ na m na-amakarị akwụkwọ n’ihi na enweghị m ike izi ihe gbasara egwú ndị Japan, n’ihi ya, m mere DVD nke egwú Japan n’ụlọ ọrụ anyị, meere DVD abụọ n’ụlọ akwụkwọ elementrị 2 na ụlọ akwụkwọ sekọndrị dị obere na Ota Ward. ọ na-akwụghị ụgwọ maka ụlọ akwụkwọ 1 na-ajụ ma m nwere ike iji ya dị ka ihe nkuzi. Mgbe ahụ, m mere akụkọ banyere "Momotaro" na DVD na egwu dabeere na akụkọ ochie. Ọ ga-amasị m ka ụmụaka na-ege ntị ndụ ndụ. arụmọrụ."
Tsurujuro Fukuhara (Onye isi oche nke Ota Ward Japanese Music Federation)
Egwu Wagoto Japanese Live (Nihonbashi Social Education Center)
A ga-eme mmemme Otawa ihu na ihu na nke mbụ n'ime afọ abụọ, biko gwa anyị echiche gị na ịnụ ọkụ n'obi gị maka ya.
Fujikage "E nwekwara atụmatụ maka ndị nne na nna na ụmụaka na-ekere òkè n'oge a, n'ihi ya, echere m na ndị nne na nna na ụmụaka nwere ike ikwurịta okwu na ụmụ ha, ma ọ bụ ma eleghị anya, ha na-enwe obi ụtọ ime nke ahụ."
Fujima: N'ezie, enwere m olileanya na ụmụaka na ndị nne na nna nwere ike ịmụta otú e si eyi uwe na mpịakọta kimono ọnụ, ọ bụghị banyere ịgba egwú."
Yamakawa: "M sonyeere m ọtụtụ ugboro, ma ụmụaka nwere mmasị na ya. Otu ụmụaka ahụ na-abịa ọmụmụ ihe ọtụtụ ugboro n'ahịrị. M ​​gwara ụmụaka ndị a, "Onye nkuzi koto n'ebe dị nso. Biko chọta ma gaa na-eme ihe. "Mana Ọ ga-amasị m ijikọ mmasị ahụ na ọdịnihu."
Fukuhara "Ememme Otawa bụ ebe bara uru nke ukwuu, yabụ m ga-achọ ka ị gaa n'ihu."
* Ọgbọ mbụ, Seiju Fujikage: Mgbe ọ dị afọ asatọ, a kụziiri ya ịgba egwú, na 8, ọ rụrụ na nke mbụ ya n’egwuregwu Otojiro Kawakami na Sada Yacco mere. Ọ lụrụ Kafu Nagai na 1903, ma ọ gbara alụkwaghịm n'afọ na-esote. N'afọ 1914, ọ tọrọ ntọala Fujikagekai, rụọ ọrụ ọhụrụ n'otu n'otu, ma ziga ụdị ọhụrụ na ụwa ịgba egwu. Na 1917, ọ rụrụ na Paris wee webata Nihon-buyo na Europe na nke mbụ ya. 1929 Tọrọ ntọala ụlọ akwụkwọ sekọndrị Toin ọhụrụ. 1931 Nrite Purple Ribbon, 1960 Onye Mmasị Ọdịbendị, 1964 Order of the Precious Crown.
* Yamakawa Sonomatsu (1909-1984): Yamada ụdị sokyoku na onye na-ede egwú. Ọ gụsịrị akwụkwọ na Tokyo Blind School na 1930.Mụtara sokyoku site na Hagioka Matsurin nke mbụ, Sanxian sitere na Chifu Toyose, usoro nhazi sitere na Nao Tanabe, yana nkwekọ sitere na Tatsumi Fukuya.N'afọ nke ngụsị akwụkwọ, ọ kpọrọ onwe ya Sonomatsu na tọrọ ntọala Koto Shunwakai. N'afọ 1950, ọ meriri ihe nrite mbụ na ngalaba mejupụtara nke asọmpi Egwu 1959st nke Japan na onyinye nrite Minista Mmụta. Anata onyinye nke 1965rd Miyagi na 68. Enyere ya na ngalaba egwu nke Agency for Cultural Affairs Arts Festival na 1981 na XNUMX. XNUMX Order of the Rising Sun, Order of the Rising Sun.
* Okiya: Ụlọ nwere geisha na maiko.Anyị na-eziga geisha na geisha na arịrịọ nke ndị ahịa dị ka ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ebe echere, na ụlọ tea.Ụfọdụ ụdị na aha dị iche iche dabere na mpaghara.
* Sumiko Kurishima: Mụtara ịgba egwu site na nwata. Soro Shochiku Kamata na 1921. Debuted na-edu ndú ọrụ nke "Consort Yu", na ghọrọ kpakpando na nke a dị mwute heroine. Na 1935, o kwupụtara ezumike nká ya na njedebe nke "Ịhụnanya Ebighị Ebi" wee hapụ ụlọ ọrụ ahụ n'afọ na-esote.Mgbe nke ahụ gasịrị, o tinyere onwe ya na Nihon-buyo dị ka Soke nke ụlọ akwụkwọ Kurishima Mizuki style.
Shizue Fujikage, Onye isi oche nke Japan Dance Federation of Ota Ward (Seiju Fujikage III)
Nagauta "Yang Guifei" (ọrụ asọmpi Japan na China)
A mụrụ na Tokyo na 1940. Ewetara Sakae Ichiyama na 1946. 1953 gụrụ akwụkwọ n'okpuru Midori Nishizaki mbụ (Midori Nishizaki). Ọ gụrụ akwụkwọ n'okpuru Monjuro Fujima na 1959. 1962 natara Fujima ụdị Natori na Fujima Monruri. 1997 Ihe nketa nke Toin High School III. 2019 Agency for Cultural Affairs Commissioner's ịja mma.
Ota Ward Japan Dance Federation osote onye isi oche, Houma Fujima (Onye isi oche nke Honokai)
Nkọwa nke onye ofufe
A mụrụ na Ota Ward na 1947. 1951 Okwu Mmalite Ụlọ Akwụkwọ Fujima Kanemon na Fujima Hakuogi. Enwetara aha nna ukwu na 1964. Nyefee na ụlọ akwụkwọ odo odo Fujima style na 1983.
Yoshiko Yamakawa, Onye isi oche nke Ota Ward Sankyoku Association (Prọfesọ Koto, Sankyoku, Kokyu)
Amụrụ na 1946. 1952 Mụrụ Jiuta, Koto, na Kokyu site na Makoto Nakazawa (Masa). 1963 kwalitere na Kyoto Todokai Shihan. 1965 Wakagikai na-achị ya. Ọ gụsịrị akwụkwọ na 1969th nke NHK Japanese Music Skills Training Association na 15.Gafere nyocha NHK n'otu afọ ahụ. N'afọ 1972, ọ gụrụ akwụkwọ n'okpuru ọgọ nna ya, Ensho Yamakawa, wee bụrụ onye isi nke egwu Yamada style koto. Ngụkọta nke recitals 1988 ka emere site na 2013 ruo 22. Na 2001, ọ ghọrọ onyeisi oche nke Ota Ward Sankyoku Association.
Tsurujuro Fukuhara, Onye isi oche nke Ota Ward Japanese Music Federation (Egwu Japan)
Mgbapụ DVD egwu Japanese (Kawasaki Noh theater)
Amụrụ na 1965.Site na nwata, nna ya Tsurujiro Fukuhara kụziiri ya egwu Japanese. Pụtara na Kabukiza Theatre na National Theatre site na afọ 18. 1988 Mepere ụlọ nkuzi na Ota Ward. 1990 Akpọrọ Tsurujuro Fukuhara mbụ. E guzobere Wagoto Co., Ltd na 2018.
Ememme Otawa 2022 na-ejikọ ụlọ mmụta ọkụ na udo nke ndị Japan
Ngosipụta ihe ịga nke ọma + n’etiti egwu ndị Japan na egwu Japan
Ụbọchị na oge
Satọde, Maachị 3
* A ga-ekwupụta nkọwa gbasara mmalite nke February.
Nhazi / Ajuju
(Ebumnuche nke ọha na eze) Ota Ward Cultural Promotion Association
Pịa ebe a maka nkọwa
Onye nka + anu!
Daalụ maka nduzi, nkwado na nkwado
"Kabuki Gidayubushi" Takemoto "Tayu Aoi Tayu"
Takemoto *, nke dị mkpa maka Gidayu Kyogen nke Kabuki, yana Tayu Aoi Takemoto, onye bụ tayu.Ka ọtụtụ afọ nke ọmụmụ gachara, na 2019, enwetara ya dị ka akụ nke mba dị ndụ, onye na-ejide ihe ọdịnala dị mkpa na-adịghị ahụ anya.
M na-ekiri ihe nkiri Kabuki na-agbasa na TV ma masịrị m ya ozugbo.
Ekele maka ịbụ onye akaebe dị ka ihe dị mkpa na-ejide ihe onwunwe omenala a na-apụghị imetụ ọnụ (akụ nke mba dị ndụ) afọ abụọ gara aga.
"I meela. Mgbe a bịara n'ihe banyere Living National Treasure, anyị kwesịrị ịgba ume ọ bụghị naanị ihe ngosi kamakwa usoro anyị zụlitere n'ọgbọ na-eto eto."
Ị nwere ike ịgwa anyị ihe Takemoto bụ na mbụ?N'oge Edo, nka akụkọ nke Joruri gara nke ọma, onye amamihe aha ya bụ Gidayu Takemoto pụtara n'ebe ahụ, ụzọ ya si ekwu okwu wee bụrụ ụdị, a mụrụ Gidayubushi.Edere ọtụtụ egwu egwu n'ebe ahụ, na ọtụtụ n'ime ha ka ewebatara na Kabuki dịka Gidayu Kyogen.Ọ dị mma ịsị na a mụrụ Takemoto n'oge ahụ?
"Nke ahụ dị mma. Na Kabuki, e nwere ndị na-eme ihe nkiri, ya mere, ndị na-eme egwuregwu na-egwu ahịrị ahụ, nnukwu ihe dị iche bụ na Gidayubushi nwere ike ịkpọ naanị tayu na shamisen. Otú ọ dị, Takemoto bụ onye na-eme ihe nkiri Kabuki. Echere m na ọ bụ ya bụ onye na-eme ihe nkiri. nnukwu ihe dị iche n'oge gara aga, okwu ahụ bụ "Gidayu" bịara na-ewu ewu, ma amaara m okwu ahụ bụ "Gidayu" bụ nwata akwụkwọ sekọndrị. N'ime akwụkwọ akụkọ ihe nkiri, Gidayu Takemoto dere "Diamond".Eji m okwu a.Tupu onye na-eme ihe nkiri agwa m, m ga-eche, ya bụ, sontaku. "
Mgbe m nọ n'ụlọ akwụkwọ sekọndrị, m na-achọbu ịga Takemoto.
"A mụrụ m na zụlitere na Izu Oshima, ma kemgbe m bụ nwata, m hụrụ n'anya ọgụ mma agha na ihe nkiri akụkọ ihe mere eme. Echere m na ọ bụ ndọtị nke ahụ na mbụ. M na-ekiri ihe nkiri Kabuki na-agbasa na TV. Ọ masịrị m ozugbo. Ọ bụ ya mere ndị ikwu m nọ na Tokyo ji kpọga m Kabukiza, bụ́ mgbe m nọ n’afọ nke abụọ nke ụlọ akwụkwọ sekọndrị.”
N'oge ahụ, Takemoto masịrị m.
"Mgbe e mesịrị, nna ukwu Gidayu kwuru, sị, 'Ọ bụrụ na ị na-amasị Joruri, ị kwesịrị ịbị na Bunraku.' Onye na-eme ihe nkiri Kabuki kwuru, sị, 'Ọ bụrụ na ị masịrị Kabuki, ị kwesịrị ịbụ onye na-eme ihe nkiri.' Ma enwere m obi ụtọ na Takemoto's Tayu. Site na oge mbụ a kpọgara m na Kabuki-za, ọ dị m mma na ogbo (site na ndị na-ege ntị).床YukaAnya m kpọgidere n'otu ebe a na-akpọ Gidayu.Ọ bụ otu ihe ahụ maka Joruri na Kabuki, mana Tayu na-egwuri egwu nke ukwuu.Nke ahụ dị egwu nke ukwuu na mmepụta ahụ dịkwa ụtọ.O nwere ihe ụfọdụ na-abụghị eziokwu, ma ha masịrị m."
Echere m na enwere m ihe ndabara nke ukwuu ịbụ onye ndu
Anuru m na amuru gi n'ezi na ulo.Ị nwere nchegbu ọ bụla ma ọ bụ oge na-adịghị mma ịbanye n'ụwa nke ntụrụndụ oge ochie site n'ebe ahụ?
"Nke ahụ bụkwa chi m, mana ọ bụ oge ịmalite usoro ọzụzụ iji zụọ ọrụ mmadụ Takemoto na National Theater. Ahụrụ m mgbasa ozi nbanye n'akwụkwọ akụkọ. Ndị na-eme ihe nkiri Kabuki na mbụ. Ọ malitere na, mana m na-achọ ịkwalite Takemoto. N'ezie, achọrọ m ịga Tokyo ozugbo wee bụrụ onye na-azụ ọzụzụ, mana achọrọ m ka ndị mụrụ m gaa ụlọ akwụkwọ sekọndrị. Ebe ọ bụ na ọ bụ ebe a na-enye ọzụzụ n'ụdị ụlọ akwụkwọ, ọ na-adị m ka ọ na-esiri m ike ịbanye n'ụwa nke ime ihe nkiri oge ochie site n'ezinụlọ ndị nkịtị. ka dị ndụ, n'ihi ya, echere m na enwere m ihe ndabara nke ukwuu ịbụ onye ndu."
N'ezie, Tayu Aoi nọ ya n'ebe dị anya.
"A mụrụ m na 35, ma agadi m mụrụ na 13. O mere na m na nne m dị otu afọ. Takemoto bụ n'usoro nke ịbanye n'ụwa a, nke ahụ bụkwa oge niile. Ọ naghị agbanwe. N'ezie, nke ọrụ ị nwere ike ịrụ dị iche iche, ma ọ dịghị klas dị ka undercard, nke abụọ, na ezi hit dị ka rakugo, ọmụmaatụ."
Ọbụlagodi na enwetara gị asambodo dị ka akụ nke mba dị ndụ, nke ahụ anaghị agbanwe.
"Ee. Dịka ọmụmaatụ, usoro nke ịnọdụ ala n'ime ụlọ ejiji agbanwebeghị. Ọ dị jụụ."
Enwere m mmetụta na Tayu Aoi na-arụsi ọrụ ike site na mmalite.
"Echere m na ọ bụ ebe ahụ ka m nwere chioma. Nke mbụ, Mr. Ichikawa Ennosuke mere ọtụtụ revival Kyogen n'oge ọgbọ nke atọ Ichikawa Ennosuke. Ọ họpụtara m n'ọgbọ nke XNUMX. Mgbe Mr. Utaemon Nakamura na-egwu egwu nke Gidayu. Kyogen, ọ na-ahọpụta m mgbe ụfọdụ, ma ugbu a Mr. Yoshiemon Nakamura, onye bụ ọgbọ ugbu a, na-agwakarị m okwu."
N'ikwu okwu banyere ọgbọ nke atọ Ichikawa Ennosuke, e kwuru na ọ bụ nwa na-agbanwe agbanwe nke Kabuki bụ onye kere Super Kabuki, na Kabuki-san bụ nwanyị nke nọchitere anya isi nke nlekọta Kabuki n'oge oge agha gasịrị.Echere m na ọ bụ ihe ịtụnanya na ndị na-eme ihe nkiri na nsọtụ abụọ nke isi ihe na ihe ọhụrụ tụkwasara anyị obi.Ọzọkwa, anụrụ m na Mr. Kichiemon nke ọgbọ ugbu a gwara onye mmepụta, "Lelee oge nke Aoi" mgbe ị na-ahọrọ mmemme.
"E nwere okwu nkịtị na ekele Kabuki nke na-ekwu, 'Site na onyinye nke nduzi, nkwado, na nkwado,' na echere m na ejiri m ha niile gọzie m. Nduzi magburu onwe ya nke ndị bu ụzọ m. Enwere m ike ịnata ya. ma nye onye isi na-eme ihe nkiri ebe ọ ga-egosi, ya bụ, ịkpọsa ya. N'ihi ya, enwere m ike ịnweta nkwado nke onye ọ bụla. Enwere m obi ekele n'ezie."
Ọ́ bụghị mgbe niile ka onye dị ka Tayu Aoi na-eme ihe ọ chọrọ ime?
"N'ezie. Dịka ọmụmaatụ, e nwere ihe nkiri a na-akpọ "Okazaki" na Gidayu Kyogen a na-akpọ "Igagoe Dochu Soroku." Ọ naghị eme ma ọlị. A na-emekarị ihe nkiri "Numazu", ma "Okazaki" anaghị eme ya. N'ikpeazụ, a ghọtara afọ asaa gara aga, mgbe Maazị Kichiemon ga-eme ya n'afọ 7. Ọ bụ ọrụ mbụ n'ime afọ 2014. Obi dị m ụtọ mgbe m nwere ike ikwu banyere ya n'ebe ahụ."
Jiri mmegharị azụ gaa n'ihu.Ọ ga-amasị m iji mmetụta ahụ rụsie ọrụ ike
Dị ka akụ mba dị ndụ, ịzụ ụmụ ọgbọ ga-abụ isi okwu, mana gịnị banyere nke a?
"M ga-anọgide na-emewanyewanye dị ka onye na-eme ihe nkiri. Mgbe ahụ, m ga-eduzi ndị na-eto eto. M na-atụ anya eziokwu ahụ bụ na ndị na-eto eto na-ekwe nkwa aghọwo ndị ọzụzụ. M ga-azụ ha. echere m na ha niile dị mkpa. Ọ bụghị ya. Ọ dị mfe, ma otu onye ọkachamara n'ịgba egwú Japan kwuru ihe a: Mgbe m na-aga Europe, ndị na-agba egwú ballet, ndị nkụzi na ndị na-egwu egwú na-adabere na onwe ha. Otu onye chọrọ, ma ha dabara maka mmadụ niile, ọ dị ụkọ ịchọta onye ji mma agha, Aga m ahapụ ihe e kere eke nye onye ziri ezi, ọ ga-amasị m imeziwanye nkà m dị ka onye nchịkwa na onye na-eme egwuregwu maka ọgbọ ndị ọzọ na-eto eto. Na-aga n'ihu, ọ ga-amasị m ịrụsi ọrụ ike na mmetụta ahụ."
Ọkpara gị abụrụla Tayu Kiyomoto.
"Echere m na nwunye m na-egekarị egwu egwu Japan dị iche iche n'ihi na ọ na-amụta ịgba egwú Japanese. Ọ bụ ya mere m ji họrọ Kiyomoto. Echeghị m banyere Takemoto. Ọ bụ ụwa na ị gaghị aga n'ihu ma ọ bụrụ na ọ masịghị gị. , Obi dị m ụtọ na ị chọtara ụwa kacha amasị gị."
Ota Ward na-agafe na Tokaido, yabụ enwere ọtụtụ ebe na-atọ ụtọ akụkọ ihe mere eme.
Ọ ga-amasị m ịjụ maka Ota Ward. Anuru m na i bi kemgbe afo iri abuo.
"Mgbe m lụrụ di n'afọ 22, etinyere m akwụkwọ maka ụlọ ọhụrụ nke Tokyo Metropolitan Housing Supply Corporation ma nweta ihe nrite. Ọ bụ ya mere m ji malite ibi na Omorihigashi. Mgbe m biri n'ebe ahụ afọ 25, azụrụ m ụlọ n'ime ụlọ ahụ. ward.Anom m ebe ahu ugbua, onye isi agba egwu nwunye m no nso, ya mere aburu m onye bi na Ota ogologo oge na-eche na ekweghm isi ebea."
Ị nwere ebe ọkacha mmasị gị?
"Mgbe m nọgidere na-ebi n'otu akwụ, amalitere m ịgagharị n'isi ụtụtụ, ọ bụrụgodị na m nwere ike ịga ije. E nwere ọtụtụ ebe na-adọrọ mmasị akụkọ ihe mere eme na Ota Ward n'ihi na Tokaido na-agafe na ya. E nwere ọdịiche dị na elu. Ọ na-atọ ụtọ ịga ije, agoro m ije na Kawasaki n'ụzọ, alọghachitere m n'ụgbọ okporo ígwè Keikyu (ọchị) Ana m eletakarị Iwai Shrine Ọ dị nso n'ụlọ m, mụ na ndị enyi m ga-eleta gị n'abalị iri na ise."
Ahụla m ya kemgbe m dị afọ iri atọ, ma ọ gbanweebeghị ma ọlị.Karịrị obere.
"Daalụ, ule ahụ nyere m ọnụ ọgụgụ dị mma nke naanị ihe dị ka mmadụ 100 n'ime mmadụ 3. Eruola m ụbọchị ọmụmụ 20th, ma a gwara m na m dị afọ XNUMX na ọnụọgụgụ. Nne na nna m nyere m ahụ ike. Ebe ọ bụ na ọ bụ onye na-agụ akwụkwọ. ihe, Ọ ga-amasị m ịkpachara anya ka ị ghara ime usoro siri ike ma daa."
N'ikpeazụ, ị nwere ike ịnye ndị bi na Ota Ward ozi?
"Amaghị m otú ụwa ga-adị n'ọdịnihu, ma echere m na iji mpaghara ebe m bi na-eme ihe na-eduga n'ịhụ mba ahụ n'anya na, site na mgbakwunye, ụwa, na achọrọ m ibi ndụ nkwanye ùgwù kwa ụbọchị. mụbaa."
Okwu: Yukiko Yaguchi
* Gidayu Kyogen: Ọrụ e dere na mbụ maka Ningyo Joruri ma mesịa ghọọ Kabuki.A na-ekwu ahịrị ndị a na-eme ihe nkiri n'onwe ya, na ọtụtụ akụkụ nke nkọwa ọnọdụ ahụ bụ Takemoto.
* Takemoto: Na-ekwu maka akụkọ gbasara arụmọrụ Gidayu Kyogen.N'elu ala n'elu ogbo ahụ, Tayu, onye na-ahụ maka akụkọ ahụ, na onye na-egwu shamisen na-egwuri egwu n'akụkụ.
Amụrụ na 1960. N'afọ 1976, a kpọtara ya Takemoto Koshimichi, Tayu nke nwanyi Gidayu. Na 1979 mbụ Takemoto Ogitayu kwere Tayu Aoi Takemoto, mbụ aha Ogitayu, dị ka ọgbọ nke abụọ, na mbụ ogbo e mere na nke ise ogbo nke National Ụlọ ihe nkiri "Kanadehon Chushokuzo". Emechara ọzụzụ Takemoto nke atọ na National Theatre nke Japan na 1980.Bụrụ onye otu Takemoto.Kemgbe ahụ, ọ gụrụ akwụkwọ n'okpuru Takemoto Ogitayu nke mbụ, Takemoto Fujitayu nke mbụ, Toyosawa Ayumi mbụ, Tsuruzawa Eiji mbụ, Toyosawa Shigematsu mbụ, na 2019th Takemoto Gendayu nke Bunraku. N'afọ XNUMX, a ga-akwado ya dị ka ihe njide ihe onwunwe dị mkpa na-enweghị atụ (aha onye ọ bụla).
Mbanye nke ndị na-azụ ọzụzụ
Ndị otu Japan Arts Council (National Theatre of Japan) na-achọ ndị na-azụ ọzụzụ maka ndị na-eme ihe nkiri Kabuki, Takemoto, Narumono, Nagauta, na Daikagura.Maka nkọwa, biko lelee webụsaịtị Japan Arts Council.
<< Official peeji nke >> Japan Arts Council
Ọdịnihu nlebara anya Ihe omume Kalịnda Machị-Eprel 2022
Ntị MGBE ozi nwere ike ịkagbu ma ọ bụ yigharịrị n'ọdịnihu iji gbochie mgbasa nke ọrịa coronavirus ọhụrụ.
Biko lelee kọntaktị ọ bụla maka ozi ọhụrụ.
Ihe ngosi pụrụ iche "Kiyomei Bunko-Ihe ndị e ketara ka oge na-aga"
Site na "Katsu Iyoko nke a ṅara n'ọkụ n'onwe ya" (Ota Ward Katsu Kaishu Memorial Museum)
Disemba 12 (Friday) - Maachị 17 (Sunday) 2022
10: 00-18: 00 (rue mgbe elekere 17:30)
Ezumike ezumike: Mọnde (ma ọ bụ ụbọchị na-esote ma ọ bụrụ ezumike mba)
Ota Ward Katsumi Boat Memorial Hall
(2-3-1 Minamisenzoku, Ota-ku, Tokyo)
Ndị okenye 300 yen, ụmụaka 100 yen, 65 afọ na karịa yen 240, wdg.
OTA Art Project "Machinie Wokaku" nke atọ
Tomohiro Kato << Iron Tea Room Tetsutei >> 2013
Ⓒ Taro Okamoto Museum of Art, Kawasaki
Febụwarị 2 (Sat) - Maachị 26 (Sat)
Wenezdee, Tọzdee, Fraịde, Satọde, Sọnde (ihe dị mkpa maka ndoputa)
(7-61-13 Nishikamata, Ota-ku, Tokyo 1F)
N'efu * A na-akwụ ya naanị maka mmemme tii.A ga-ewepụta ozi zuru ezu na mbido February
( ntọala webatara mmasị ọha) Ota Ward Cultural Promotion Association Cultural Arts Promotion Division TEL: 03-3750-1611
Mmekọrịta Ọhaneze na Nụrụnụ Ọha, Ngalaba Nkwalite Nkà Mmụta Ọdịbendị, Ota Ward Cultural Promotion Association
Ota Ward Cultural Arts Information Akwụkwọ “ART bee HIVE” vol.8 + bee!
Ota Ward Cultural Arts Information Akwụkwọ “ART bee HIVE” vol.7 + bee!
Ota Ward Cultural Arts Information Akwụkwọ “ART bee HIVE” vol.6 + bee!
Ota Ward Cultural Arts Information Akwụkwọ “ART bee HIVE” vol.5 + bee!
Ota Ward Cultural Arts Information Akwụkwọ “ART bee HIVE” vol.4 + bee!
Ota Ward Cultural Arts Information Akwụkwọ “ART bee HIVE” vol.3 + bee!
Ota Ward Cultural Arts Information Akwụkwọ “ART bee HIVE” vol.2 + bee!
Ota Ward Cultural Arts Information Akwụkwọ “ART bee HIVE” vol.1 + bee!